Ukwenza okusisigxina - ukudweba amathambo: ukuchasana
Ubuhle bomfazi Iifake Tattooing
I-Cosmetics kunye nomfazi ngamagama amabini angenakulinganiswa. Ukuba sisengumantombazana amancinci, sijonga ngokucophelela indlela oomama abazenza ngayo, zama ukuxelisa, siphumela iziqholo kwi-bag cosmatic and we paint, ngoxa kungekho mntu usekhaya. Ngenxa yoko, amantombazana akhula, kwaye umkhwa wokungahambi ngaphandle kokwenza i-makeup. Kukho iintlobo ezimbini zokubumba: imihla ngemihla kwaye isigxina. Eyokuqala sibeka kwaye sihlamba imihla nganye. Kodwa namhlanje sifuna ukuthetha malunga neyesibini, okanye kunoko, imiba ethile enqabela ukusetyenziswa kwayo. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje "Ukubumba okusisigxina - ukudweba amathambo: ukuchasana."
Iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso kunye neemveliso zokuziqhenqa asikwazi ukuvuya ngexesha lethu. Uninzi lwemibala yembala yemilomo, izithunzi kunye neenckon zokuthenga nokuzama into entsha. Kodwa ngelixa wonke umntu eyazi ukuba ukuzenzela rhoqo kunobungozi kwesikhumba sebuso besifazane. Apha ukusinceda sisiza ummangaliso wetheknoloji yanamhlanje - itekisi yokwenza isigxina. Le yindlela entsha yehlabathi lanamhlanje apho kuninzi ixesha. Emva kwakho konke, ngamnye umfazi unomhla omtsha kunye nokwenza. I tattoo yokwenza isigxina ngumsindisi nje. Uncedisa ukuchitha ixesha elongezelelweyo kwisikhokelo semilomo yemilomo, iinkophe, iintsimbi. Akunceda kuphela ukugcina ixesha, kodwa nokugcina impilo yekhanda lobuso. Kwakhona kulula kakhulu kubafazi abasenalo umnqweno wokwenza, okanye emva kokuya echibini, i-gym ayinayo amandla. Ngaphezu koko, kulula kakhulu, kuba imilomo yakho, amehlo, iinyawo ziya kuhlala zibonisa ngokucacileyo, kwaye ingakumbi xa kungekho ndlela yokusebenzisa izimonyo. Kodwa, kwinqanaba elingakanani, likhuselekile? Ziziphi iimpawu zokuchasana zokubumba ngokusisigxina kwe-tattooing?
Ukwenza ngokusisigxina kunamathuba amaninzi, makhe siqale ngokuthetha ngabo. Ngombulelo wokubhala, unokwenza uncedo olubaluleke kakhulu, olungayi kuze uphumelele ngamapensela okanye amabhuloho. Ukubhala amathambo okusisigxina kuza kubancedisa abo basetyhini abanesiphako sentsholongwane okanye abafumanekayo, umzekelo umlomo ococekileyo, okanye iinwele ezinqabileyo ezifuna ukubunjwa, zikhangele kwaye zimibala. Kwintombazana yebhizinisi, le nto iyona ndlela ifanelekileyo, kuba ngexesha labo elixakekileyo abanalo naliphi ixesha elongezelelweyo lokulungisa i-makeup yabo, bongeza into encane kumntu njengolu luphambili kwimpumelelo yabo kwishishini. Kungakhathaliseki ukuba bathetha njani, bahlangana kwiingubo, bahamba kunye nawe engqondweni. Ukufundwa okusisigxina akudingeki ukuba utshintshwe kwaye kulungiswe yonke ihafu yesixa, iyure, imini, ngoko oku kuyona ndlela ingcono kunazo zonke. Kodwa ke, iziganeko ezinjalo zomzimba ezifana nokuwa, ukunyamekela amehlo, okanye iibhegi phantsi kwamehlo okuzenzekelayo amathambo angakwazi ukufihla.
Ngoku itekisi yokwenza ngokusisigxina iyinto enokuthengisela wonke umntu, ngoko unikela ngokukhethekileyo kwabasetyhini beeminyaka ezahlukileyo, ukusuka kumantombazana amantombazana ukuya kumakhulu omkhulu. Kodwa ke kukufanelekile ukukhumbula ukuba ukwakheka ngokusisigxina, njengawo nawuphi na umsebenzi kunye nenkqubo, edibene nokuphazamiseka emzimbeni, unempawu zokuchasana. Ukubumba okusisigxina kunqatshelwe ngokucacileyo kubasetyhini abanezifo ezinzima zesimo se somatic, kunye nezikrakra zetekisi. Ngoxinzelelo lwe-arterial, inkosi iya kukhanyela ngokukhawuleza inkqubo. Kwaye kungekhona ngenxa yokuba ubi kakhulu, akukwazi nje ukuba inkqubo iya kuchaphazela njani umzimba wakho nokuba yintoni imiphumela yayo.
Kwizifo ezinxulumene ne-low coagulability yegazi, akufanele ukulindele inkqubo efanayo. Ekubeni i-tattoo eyenziwa ngokusisigxina yenziwa kwaye njengothambo oluqhelekileyo, oko kukuthi, akuyikugqithisa ngokukhawuleza kwesikhumba ngokusungulwa kwamapayipi akhethekileyo, kodwa, njengoko kwaziwa, ukuphalala kwegazi kulandela ukugqitywa kwesikhumba, kuba ezi zilonda ezincinci. Yaye ukuba unayo i-blood clotting embi, le nkqubo inqatshelwe ngokucacileyo kuwe, kuba inkqubo yokuphulukisa ingaba yinde kwaye ibuhlungu, ukuba akukho miphumo embi kakhulu. Inkosi eyokuqala yokuqala iyicingisisa ngempilo yabathengi bayo, kwaye ke kuphela malunga nekhredithi yakhe. Ukuba unomdla wokuziphendulela, okokuqala yenza uvavanyo lokuba unobungozi kwizonyango ezisetyenziselwa ukuzongela isigxina, njenge-ultracaine test, esetyenziswa njenge-anesthetic ngexesha le-tattoo inkqubo. Ukuba awunakho ukuthambekela kunye nezinto ezifunekayo zokunyamezela, hamba ukwenza izinto, ufumane i-master well for you and make a tattoo tattoo of the lips, eyebrows, foil, khetha into ethile.
Oomama abakhulelweyo nabancinci, ukutotwa ngokuzenzekelayo tattoo kuyaphikisana, ngenxa yobukho beekhemikhali ekubunjweni kwayo. Okokuqala, kuyingozi kumntwana wakho, kuba umzimba omtsha unobungozi obuhlukahlukeneyo beekhemikhali. Ngoko ke, ukuba ulungele phantsi kodidi lwamama, kukulungele ukulinda ngokuzenzekela ngokusisigxina, ulungele le nkqubo emva koko. Ngexesha lokuya esikhathini, oogqirha abacebisi ukuba benze ukwenziwa ngokusisigxina, ngokuba ngexesha lokuya esikhathini, ukuphuma kwegazi ngokugqithisileyo kwenzeka emzimbeni, kwaye umda weentlungu uya kwanda, ngoko kungcono ukuyeka ukuzenzeka ngokusisigxina ngeli xesha. Ngokuqinisekileyo, abafazi abanesifo sokuhluthwa nabo bayaphikisana ne-tattoo, kunye nabasetyhini abanezifo zesikhumba eendawo zokusebenzisa uncedo olusisigxina.
Kukho iimeko xa ungeke wenze ukwenziwa ngokusisigxina. Ukuchasana, kwindawo yokuqala, ukuxhalabisa abo basetyhini abanezifo ezivuthayo zesikhumba, kungcono ukuba bangabangcipheki ngenkqubo yokwenza itekisi yokwenza isigxina, kwaye ngakumbi ukuba izilonda zesikhumba zihlala kwindawo yokwenza isigxina. Nangona ungenayo i-herpes, okanye uhlobo oluvuthayo lwe-acne, kodwa uvakalelwa indlela yabo, ngenxa yolonwabo oluhle, uphinde ulungele inkqubo yokwenza ngokusisigxina, ukususela ngexesha ngexesha elingazange lenzeke ngokukrakra emzimbeni, ukwakheka okusisigxina kuyaphikisana.
Ukuba awunayo nayiphi na ingqinano kwinkqubo yokwenza isigxina, unokuphepha ngokuya kwi-salon uze uzihlobise. Kodwa khumbula ukuba inkqubo yokuphulukisa ithatha iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-14, ngamnye ngumfazi ngamnye. Sekunjalo kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba emva kokuba inkqubo iqhubekile, umzekelo, ukuvuvukala kwegum, i-lip tattooing, okanye umphumo "wamehlo aqhekekileyo" ekubhaliseni iinkophe. Ungakulibali ukuba olo hlobo lwenziwe luyimfuneko kwakhona ukuba lulandele, ingakumbi emva kwenkqubo. Kuzo zonke iingqinisiso kunye nobunzima obuzayo oya kufakwa kwi-salon kwi-salon, ngenxa yolu mfuneko nje ukuba uye kuyo kuye ukubonisana. Kwaye ngokubaluleke kakhulu, ungakulibali ukuba uhle kwaye ungenasigxina sokwenza i-tattooing, izimonyo kunye nezinye izinto ezingcolileyo ezithathwa ngumphakathi wanamhlanje.
Inkqubo yokwenza isicelo sokwenza isigxina
Ukutshatyalaliswa kwemifanekiso yokubhala ngomlomo
Iimpazamo zokuzenzela ngokusisigxina
Konke malunga nokwenza i-eyebrow
Ukwenza ngokusisigxina: umzobo weenki
Yintoni ibonti yamashiya
Yintoni enokuthetha nomyeni wakhe, zeziphi izihloko?
Iiprogram zokuQinisekisa kwabafazi
Indlela yokukrazula intombazana engumntwana ovela kwisantya esincinci
Ukuphononongwa kwe-movie "Clever"
Ukunyangwa kwesifo samathambo ekhaya
Itheyibhile yeendleko ze-glycemic yemveliso: senza ukutya okuchanekileyo ukulahlekelwa isisindo
I-mastic i-mastic kunye ne-marshmallow
Izilungiso kwisondlo ngesifo seengtso
Indlela yokugcina iklabishi entsha
SPA iinkqubo ekhaya
I-Physiology - ii-hormone zesini
Amafolda afana nobugcisa: ukuqokelela kweGeorge Hardinge Dynasty S / S 2016
Izipho zoNyaka omtsha kunye nobucwebe ngezandla
Indlela yokuphumelela uthando lomntu waseArmenia